4 fanadihadiana fanadihadiana tena mahaliana momba ny dokam-barotra | Famoronana an-tserasera
Mitovy hevitra amin'ny fanodikodinana ve ny fandresen-dahatra? Hatraiza no ara-dalàna ny paikadin'ny dokam-barotra ary tokony ekena? Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny dokam-barotra eo amin'ny tontolo iainantsika ary inona no vokatr'izany eo amin'ny rafitra sosialintsika? Androany dia te-hizara aminareo ny safidin'ireo fanadihadiana efatra lehibe izahay izay manadinika ireo teboka nokleary eo amin'ny tontolon'ny dokam-barotra.
Ao amin'izy ireo ianao dia hahita fampahalalana tena mahaliana momba ny fizotrany anatiny na ny fihetsiky ny fanentanana dokam-barotra, ny tantaran'ity sehatry ny matihanina ity hatramin'ny nahaterahany na ny lanjan'ny fitondran-tena misy amin'ny fanaony. Tsy misy isalasalana fa mametraka fanontaniana lehibe izy ireo fa hahaliana antsika rehetra izay anisan'ny tontolon'ny marketing, ny endrika ary ny fifandraisana matetika ny manontany tena.
1 Manjifa ho faty
2 Teboka 50 taona
3 Ny herin'ny dokam-barotra amin'ny fotoana amidy
4 Ohatrinona ny vidin'ny olombelona?
Manjifa ho faty
Efa nahatsapa ve ianao fa, amin'ny fiainanao andavanandro, dia misy "zavatra" foana izay mandrisika anao hividy karazana vokatra na serivisy, na dia tsy mila izany aza ianao? Ity fanadihadiana fanadihadiana mahafinaritra ity dia momba ity sy ireo olana hafa, izay anehoana an-karihary antsika ny paikady sasany ampiasain'ny marika lehibe hamoronana ireo filàna diso rehetra ao amintsika ireo. Zava-misy iainantsika miaina ao anaty fiarahamonina mpanjifa tena mpanjifa, na izany aza dia zavatra izay noheverinay fa, noho izany, tsy raharahaintsika. Saingy indraindray mety ho hevitra tsara ny mijanona sy mieritreritra hoe iza no mitarika ny fiainantsika, ny zavatra ilaintsika ary ny fanapahan-kevitsika satria, na dia toa loharanom-paharesena maharesy lahatra fotsiny aza ny paikady fanaovana dokambarotra sy marketing, dia matetika izy ireo no mibaiko ny zavatra ataontsika na ny fanapahan-kevitsika ary, ny ratsy indrindra, ny fahitantsika ny zava-misy, ny famoronana filàna diso ary ny fanaovana ny tenantsika ho saribakoly amin'ny tsena hatrany amin'ny fanantenana fiadanam-po tsy azo tratrarina.
Teboka 50 taona
Ny dokambarotra fahitalavitra voalohany dia nalefa tany Espana tamin'ny 1957. Nanararaotra ity daty ity ity fanadihadiana ity mba hitantara ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra miorina amin'ny dokambarotra voalohany, izay natao mivantana sy nampiasa baoritra nasiana marika avy amin'ireo masoivoho. Amin'ny alàlan'ny mpahay tantara, sosiolojia ary mpanao dokambarotra dia hianarantsika ny fomba taratry ny teboka ireo fiovana teo amin'ny fiarahamonina Espaniôla tamin'ny tapaky ny taonjato lasa. Ho hitantsika ny dokambarotra marika indrindra, izay hanampy amin'ny fahazoana ny fizotrany nitarika an'i Espana ho mpitondra eran'izao tontolo izao amin'ny famoronana dokam-barotra amin'ny fahita lavitra.
Ny herin'ny dokam-barotra amin'ny fotoana amidy
Graphispack dia fikambanana Espaniola mpamatsy ho an'ny indostrian'ny sary, fonosana ary dokam-barotra amin'ny fotoana amidy. Ilay horonantsary fanadihadiana momba ny fampiroboroboana, nataon'i ADIFA PLV sy POPAI tsara, miaraka amina script sy fitarihan'i Pere Serrat sy ny ekipany iray manontolo, dia manome andian-dahatsoratra data sy torohevitra ho an'ny mpanao dokam-barotra ankehitriny. Faly izahay fa ny fikambanana sy andrim-panjakana any Espana dia mamokatra fanadihadiana momba ilay sehatra. Na ny mpiara-miasa aminao dia afaka manaiky ary manome tahiry / mpanohana tahirin-kevitra toy izao.
Ohatrinona ny vidin'ny olombelona?
Tena ilaintsika ve ireo zavatra heverintsika fa ilaintsika? Marina daholo ve ny zavatra ambaran'ny haino aman-jery rehetra? Ohatrinona ny vidin'ny ain'ny olombelona? Fomba iray fanaovana kajy an'io ny iray izay ampiasain'ny mpisolovava an'ny Union Carbide iraisampirenena hanamboarana ny tambin-karama ho an'ireo traboina tamin'ny voina Bhopal tamin'ny 1984. Raha ny vola miditra isam-karita an'i India (tamin'izany fotoana izany) 250 dolara raha ny an'i Etazonia dia nihoatra ny 15.000, azontsika atao ny mamintina fa ny salanisan'ny "fiainana Indiana" dia 8.300 dolara raha ny "fiainana amerikanina" dia 500.000. Rehefa manisa ny sandan'ny ain'olombelona isika matetika dia mampiasa "fanehoam-bola"; izany hoe amin'ireo kaonty kaonty ivelany izay ezahantsika hahazoana vola tsy voatanisa: vola, biby fiompy, entana. Fa inona ny sandan'ny vola, ny fiompiana ary ny varotra? Araka ny fantatsika, David Ricardo sy Adam Smith no voalohany namolavola ny firafitry ny lalàna ny fifandraisana iray izay neken'ny olona rehetra tamim-pahakingana tamin'ny fifanakalozam-bolany sy ny varotra nataony: izay mampifandray ny "sandan'ny" zavatra iray miaraka amin'ny fitambaran'ny Fotoana sy Job. Taty aoriana, nanadio io famolavolana io i Karl Marx tamin'ny alàlan'ny fanoloana ny "mpiasa" ho "herin'ny asa" ary ny famantarana ny sandan'ny entam-barotra miaraka amin'ny "fotoana ilaina ara-tsosialy amin'ny famokarana azy." Avy any i Marx dia nanatsoaka endrika fampiasa amin'ny fitrandrahana, tsy miankina amin'ny kapoka sy ny foreman, miafina amin'ny endrika tsara sy mora azo: ny karama, raha ny sandany kosa dia avy amin'ny "herin'ny asa" ampiasain'ny olombelona amin'ny famokarana (izay dia "hery" ivelany manampy amin'ny fizotry ny famokarana), ny sandan'ny "hery" dia raikitra mifandraika amin'ireo entana novokariny. Saingy ity mifanohitra hevitra ity dia mamaly ny fanontaniana ifotony: ny olombelona ve tsy manana ny lanjan'ny tenany, tsy misy lanjany mahaleo tena? Ny kapitalisma dia hanaiky ny iray: ny fahaizany manokana "manome lanja", amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fotoana / asa, zavatra maty na, inona no mitovy, hamokarana harena kapitalista. Ny "herin'ny asa" dia entam-barotra tsy manam-paharoa izay, lavitra ny lanin'ny fampiasana azy, dia manome lanja ny entam-barotra vokariny. Ohatrinona ny hasin'ny olombelona? Ny fotoana niasantsika tamin'io. Antso Cheesy fa "fitiavana".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 4 fanadihadiana fanadihadiana tena mahaliana momba ny dokam-barotra